Majaajilo - Wikipedia
Majaajilo (; ) waa bandhig faneed iskugu jira qosol, shactiro, madadaalo, sheeko iyo ruwaayadeyn, kaasi oo loogu talogalay in lagu madadaaliyo dad. Majaajilada waxaa lagu soo bandhiga meel masrax ah, filim la qabtey, cod la duubay iyo qaabab kaleqaar kale.
Charlie Chaplin waa nin ku caan ah filimaanta majaajilada ah.
Guud ahaan waxaa majaajilada waxaa marka hore alifa abwaan, halabuur ama qof asaga laftiisu majaajileyste ah, ka dib waa la qoraa, waxaana lagu daraa sheekooyin, muusig, iyo majaajilo ilaa ugu dambeynta loo dhiibo fanaaniin iyo jilaa soo bandhiga ruwaayadaas.
2 Majaajilo iyo Ruwaayadaha Caanka
Majaajilada, ruwaayadaha iyo guud ahaan Suugaanta waxaa tan iyo wakhti hore loo samayn jiray si habsami iyo halabuur leh. Majaajiladu waxaa lagu daraa ruwaayadaha Af Soomaaliga waxayna bilaabmeen badhtamihii qarnigii 20aad.
Majaajilo iyo Ruwaayadaha Caanka
If iyo AakhiroAakhiro
Habloyahow Hadmaad Gursan doontaan?
Romeo and Juliet (ruwaayada ugu caansan Ingiriis ka)
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Majaajilo&oldid=214822"
Last edited on 9 Agoosto 2021, at 00:58
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 9 Agoosto 2021, marka ee eheed 00:58.